Wakiilka SNM ma la dooran doonaa? | allsanaag
Wakiilka SNM ma la dooran doonaa?
Waa Kuma Xildhibaanka soo socda ee beesha reer Saalax iyo Bahwadaagtoodu?
Beesha reer Saalax ee Warsangeli, oo ah Beel ay Marabbidu Isaaqu tarbiyeesteen ay ku yar tahay ama lahaynba, kana mid ah beelaha Warsangeli kuwooda aadka ula dagaalama Alshabaabka iyo argagixisada, Beel ahaan intooda badan dal iyo dibadba aaminsan inay yihiin Puntlanders. Beesha reer Saalax iyo Bahwadaagtoodu waxay qayb libaax ama hormuud ka yihiin suurtalgalnimada jidka Ceel daahir inuu gaaro Ceerigaabo
Beesha reer Saalax iyo Bahwadaagtooda, ayaa maalmaha soo socda waxay iska soo dhex xuli doonaan xubintii Xildhibaan ee ay ku yeelan lahaayeen Baarlamaanka Puntland.
Murashaxiinta Xilkan u wada ordaya ayaa wada ah Puntlanders, hase ahaatee waxaase ku dhex jira wakiil ay SNMtu soo maalgeliyeen oo isaguna ka soo jeeda beesha, sida muuqatana ay la socdaan qaar ka mid ah isimada Beeshu.
Beeshani xaq waxay u leedahay inay qabataan hogaanka Baarlamaanka Punland, si taa loo helona waa inay Garowe u dirsadaan aqoonyahanadooda Puntland aaminsan. oo ka ilaaliyaan nin ay ka argagaxaan bulshada reer Puntland intooda kale
Ugu danbayntii waa lagamna maarmaan, waana arin loo bahan yahay in Guddi ay beeshu u saarto kala reebreebka Murashaxiinta ay qaarkood yihiin Somaliland kuwana Puntland, si taa loo helana waa inay doorasho dhacdaa oo meesha laga saaraa qof jeclaysi iyo isim kaligii wax magacaaba. Maalmaha soo socda Bulshada reer Maakhir waxay indhaha ku hayaan magaalada Habar shiro , iyaga oo rajenaya in Xildhibaan ay ku farxaan ay beesha Reer Saalax iyo Bahwadaagtoodu iska soo dhex xulaan. Guul ayaan u rajeenaynaa xubnaha aanu Puntland wadaa aminsanahay oo xilkan u tartamaya
← Xisaabiyaha Guud ee dowladda oo si kulul u weerartay Wasiirka Maaliyadda DDSI oo Gurmad Gaarsiisey Deegaamadii Lagu Dagaalamay ee Dhumay. →